Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo | Carewell SEIU 503
Xulo qayb si aad u aragto Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo
Progam Caawinta Shaqaalaha
Waxaad kuheli doontaa caymiska qorshaha daryeelka ilkaha ee Kaiser Permanente marka aad xaq u yeelato dheefaha ilkaha ee Carewell SEIU 503. Si aad xaq ugu yeelato waa inaad shaqeysaa 40 ama in ka badan oo ah saacado shaqo oo u qalma - oo sidoo kale loo yaqaan saacadaha gorgortanka - laba bilood oo isku xigta. Markaa waxaad u baahan tahay inaad sugto bil dheeri ah inta saacadahaaga loo soo sheegayo Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka. Ka aqri wax dheeraad ah oo ku saabsan u-qalmitaanka bogga Ilkaha.
Carewell SEIU 503 ma bixiso xulashooyin kale oo ku saabsan caymiskaaga ilkaha. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser, waxaa lagugu qori doonaa qorshaha Xulashada Ilkaha ee Kaiser Permanente. Xulashada Daryeelka Ilkaha ee KP PPO waxaad awoodi doontaa inaad booqato dhakhtarka ilkaha oo shati haysta. Si kastaba ha noqotee, waxaad bixin doontaa waxyar haddii aad booqato dhakhtarka ilkaha ee kaqeyb gala shabakadda Kaiser's PPO. Si loo xaqiijiyo inaad ku nooshahay gudaha ama banaanka Aagga Adeegga Kaiser, la xiriir Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka 1-844-507-7554, ikhtiyaarka 3 ka dibna doorashada 2.
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan iskuduwidda dheefaha, fadlan la xiriir Kaiser Permanente Customer Service.
Miyaan ka bixi karaa dheefaha Barnaamijka Ilkaha, Aragtida + ama Gargaarka Shaqaalaha?
Haa. Waad buuxin kartaa Foomka Ka dhaafida waxaadna u gudbin kartaa Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka.
Waxaad kuheli doontaa caymis kujira qorshaha Ameritas kaas oo bixiya araga, maqalka, iyo waxtarka LASIK markii aad xaq u yeelato aragtida Carewell SEIU 503 + maqalka. Si aad xaq ugu yeelato waa inaad shaqeysaa 40 ama in ka badan oo ah saacado shaqo oo u qalma - oo sidoo kale loo yaqaan saacadaha gorgortanka - laba bilood oo isku xigta. Markaa waxaad u baahan tahay inaad sugto bil dheeri ah inta saacadahaaga loo soo sheegayo Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka. Ka aqri wax dheeraad ah oo ku saabsan u-qalmitaanka bogga Aragtida + Dhegeysiga .
Waxaad kuheli doontaa caymis adiga oo u maraya Caafimaadka Habdhaqanka Reliant marka aad xaq u yeelato dheefaha Carewell SEIU 503 EAP Si aad xaq ugu yeelato waa inaad shaqeysaa 40 ama in ka badan oo ah saacado shaqo oo u qalma - oo sidoo kale loo yaqaan saacadaha gorgortanka - laba bilood oo isku xigta. Markaa waxaad u baahan tahay inaad sugto bil dheeri ah inta saacadahaaga loo soo sheegayo Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka. Ka aqri wax dheeraad ah oo ku saabsan u-qalmitaanka bogga Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha .
Ma u isticmaali karaa Kaarkayga Ku-habboonaanta Waxtarka kharashyada EAP?
Sideen ugu istcimaalaa dheefaha barnaamijka kaalmada shaqaalaha, sida la-talinta iyo qorsheynta dhaqaalaha?
Waxaad ka heli kartaa adeegyada adoo booqanaya ibhsolutions.com ama soo waca 1-866-750-1327. Lambarkaaga gelitaanka waa: OHWBT.
Waa maxay & #039; s Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah oo miyaan xaq u leeyahay hal?
Muddada Isqorista Gaarka ah ("SEP") ayaa kuu oggolaanaysa inaad iska diiwaangeliso qorshaha caymiska caafimaadka ee ka baxsan xilliga diiwaangelinta Furan ee caadiga ah (Nofeembar 1 - Dec. 15). Waad u qalmi kartaa SEP haddii aad la kulantay isbeddelo xagga nolosha ah, sida inaad lumiso caymiska shaqada, ama isbeddel ku yimaad dakhliga kaa dhigaya inaadan u qalmin Medicaid. Haddii SEP-kaaga uu oggolaado Suuqa, waad iska qori kartaa Qorshaha Suuqa laakiin waxaad haysataa waqti kooban oo aad ku qortami karto, badiyaa 60 maalmood laga bilaabo taariikhda dhacdadaada u-qalmitaanka nolosha. Goobta Suuqa ayaa sidoo kale u baahan doonta caddeyn muujineysa inaad uqalanto Muddo Isqorista Gaarka ah, sidaa darteed waxaad ubaahan doontaa inaad soo uruuriso macluumaadkaas sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aad u dhammaystirto diiwaangelintaada. Caawinaad, wac 1-844-503-7348.
Haddii aad xaq ugu leedahay caymis caafimaad xaaskaaga / seygaaga, laakiin aad dooratay inaadan iska qorin caymiskaas, waxaad xaq u yeelan kartaa Gargaarka Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Carewell SEIU 503. Wac 1-844-503-7348 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Waad awoodaa, in kasta oo si weyn lagugula talinayo inaad isticmaasho adeegyada Xirfadlayaasha Caymiska Dooxada, oo leh khibrad sannado ah la shaqaynta barnaamijka dheefaha ee Carewell, ka caawinta adeeg bixiyaasha daryeelka diiwaangelinta qorshooyinka Suuqa ee la oggol yahay, iyo hubinta bixiyeyaasha daryeelka inay heli karaan Kaalmada Qiimaha Caafimaadka. Haddii aad isticmaasho wakiilkaaga caymiska, uma baahnid inaad buuxisid foom kasta oo Agent of Record ah oo lagu daray waraaqaha sanadlaha ah, laakiin fadlan wac 1-844-503-7348 si aad u ogeysiiso mid ka mid ah wakiilladayada inaad isticmaaleyso wakiilkaaga oo aadan isticmaalin buuxinta foomka Wakiilka Diiwaanka.
Waad u qalmi kartaa Gargaarka Kharashka Daryeelka Caafimaadka haddii aad xaq u yeelatay dheefaha Carewell SEIU 503 ka dib dhammaadkii muddadii ugu dambeysay ee Diiwaangelinta Furan oo aad ka diiwaangashan tahay qorshe aan la oggolaan oo ku yaal Suuqa Caafimaadka. Xaaladdaas oo kale, waxaad heli doontaa Kaarka Fududeynta Faa'iidada si aad u bixiso kharashyada jeebkaaga oo dhan, waxaadna u qalmi doontaa in laguu soo celiyo kharashyadaada caymiska illaa inta ka yar ee lacagtaada rasmiga ah ama celceliska lacagta caymiska ee ay helaan bixiyeyaasha daryeelka u qalma on Gargaarka Qiimaha Caafimaadka. Si aad usii wado helitaanka Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka dhamaadka sanadka, waa inaad iskaqortaa qorshe la ansixiyay fursadaada ugu horeysa isla markaana ugu dambayn Diiwaangelinta Furan (inta udhaxeysa Nofeembar 1 iyo Diseembar 15). Haddii kale, Kaalmadaada Kharashka Daryeelka Caafimaadka waxay joogsan doontaa dhammaadka sannadka kaalandarka. Si aad u hubiso haddii aad u-qalanto celcelis celinta celceliska, wac 1-844-507-7554, ikhtiyaarka 3, ikhtiyaarka 2.
Waa maxay lacagta caymiska caafimaadka ee saafiga ah?
Caddadkaaga saafiga ahi waa lacagta bil kasta ee ay tahay inaad siiso shirkaddaada caymiska si ay u ilaaliso caymiskaaga. Tusaale ahaan, haddii lacagtaada guud (qiimaha buuxa ee lacagta caymiska ee lagaa qaado) ay tahay $500 bishiiba isla markaana Abaalmarinta Canshuuraha ee Advance Premium ama APTC (kaalmada maaliyadeed ee Dowladda Federaalka) ay tahay $200 bishii, lacagtaada caymiska ayaa noqon doonta $300 bishiiba.
Waxaan racfaan ka qaatay sanadkii hore waxaana la ii ogolaaday inaan doorto qorshe kale oo la ansixiyay oo aan ka doorto midka aaggayga. Maxaan sameeyaa haddii aan doonayo inaan sii wado helitaanka Gargaarka Qiimaha Daryeelka Caafimaadka?
Haddii qorshaha aad iska diiwaangelisay uu wali yahay qorshe la oggol yahay sannadka soo socda, go'aanka ku saabsan rafcaankaaga weli wuu taagan yahay. Waxaad u baahan doontaa inaad dib u eegto macluumaadka ku yaal boggan si aad u hubiso inaad qaaddo tallaabooyinka ku habboon inta lagu guda jiro Diiwaangelinta Furan si aad u cusboonaysiiso caymiskaaga caafimaad isla markaana aad u sii wadato helitaanka Gargaarka Qiimaha Daryeelka Caafimaadka. Waxaa sidoo kale lagugu dhiiri gelinayaa inaad dib u eegto soo koobida qorshaha cusub iyo shabakadaha bixiyaha si aad u hubiso in ikhtiyaarkan uu wali kuu shaqeynayo.
Waxaan ku noolahay Degmada Lane ama Aagga Adeegga Kaiser ee Linn County oo waxaan ka diiwaangashan yahay Qorshe Providence la Oggolaaday ilaa 2018, miyaan u baahanahay inaan beddelo qorshooyinka?
Maya, maahan inaad bedesho qorshooyinka. Waad u beddeli kartaa qorshaha 2021 ee la ansixiyay ee KP Silver 2500/40 haddii aad jeclaan lahayd, ama waad ku sii nagaan kartaa qorshaha Providence la ansixiyay. Markaad u gudubto qorshaha la ansixiyay ee Kaiser, taasi waxay noqon doontaa Qorshahaaga La Ansixiyay inta ka harsan sanadka oo mar dambe ma yeelan doontid ikhtiyaar aad ku hesho faa'iidooyinka Carewell SEIU 503 ee qorshaha Providence ka dib markaad beddesho.
Waxaan ku noolahay Degmada Lane ama Linn County Kaiser Service Area oo waxaan isdiiwaangelinayaa markii ugu horeysay faa'iidooyinka Carewell SEIU 503; miyaan iska qori karaa qorshaha Providence la ansixiyey?
Maya, haddii aad ku nooshahay Degmada Lane ama Linn County Kaiser Service Area oo aadna dhowaan isqorayso faa'iidooyinka Carewell SEIU 503 ee sanadka 2021, Qorshahaaga La Oggol yahay waa qorshaha Kaiser KP Silver 2500/40.
Kaadhka Habboon ee Faa'idada
Biilkaaga biilka caymiska bilaha ah ee loogu talagalay qorshaha Suuqa la ansixiyay.
Kharashaadka bixinta adeegyada caafimaadka iyo daawooyinka laguu soo qoro qorshahaaga Suuqa la ansixiyay. Bixinta lacag bixinta (ama bixinta) waa qaddar go'an oo qorshahaaga caymiska uu kaaga baahan karo inaad bixiso, inta badanna waxaa sabab u ah waqtiga aad hesho adeegga ama rijeetada laguu qoray.
Caymiska lacagta ee adeegyada caafimaadka iyo daawooyinka laguu qoro qorshahaaga Suuqa Suuqa ee la oggolaaday. Caymiska caymisku waa boqolkiiba kharashyada ay tahay inaad iska bixiso adeegyada uu caymiskaagu daboolayo. Tusaale ahaan, haddii qorshahaaga caymiska uu leeyahay "80/20" qaddarin lacageed, tani macnaheedu waa, kadib markaad bixiso wax kasta oo lagaa goynayo, shirkaddaada caymiska ayaa bixin doonta 80% ee kharashka ku baxa kharashka caafimaadka waana inaad bixisaa inta hartay ee 20%.
Kaarkaagu wuxuu u shaqeeyaa sida kaarka bangiga oo caadi ah, oo leh kala duwanaansho muhiim ah:
1. Kaarkaagu wuxuu ku xadidan yahay isticmaalkiisa, taasoo la micno ah waxaad u isticmaali kartaa oo keliya kharashyada la daboolay ee ku hoos qoran "Maxaan u isticmaali karaa Kaarka si aan u bixiyo?"
2. Kaarkaaga kuma isticmaali kartid ATM ama lacag caddaan ah markaad soo iibsaneyso.
Kaadhkaaga waxaa ku yaal labo “akoon”. Hal koonto ayaa lagu soo shubay xaddiga sanadlaha ah ee lagu bixinayo lacag bixinta dawooyinka iyo dawooyinka, lacagaha laga jaro iyo kharashaadka caymiska ee adeegyada la daboolay iyo daawooyinka. Sanadka 2021, lacagtaas waa $6,500, laakiin tani way isbadali kartaa sanadba sanadka ka dambeeya. Koontada kale waxaa lagu shubay xaddiga lagama maarmaanka u ah in lagu bixiyo khidmadda bilahaaga billaha ah: qaybta caymiskaaga caymiska caafimaadka shaqsiyeed ee aan ku jirin amaahdaada canshuurta federaalka (APTC).
Hadhaaga hadhaagu miyuu ku wareegaa sanadka xiga & #039;
Maya. Xaddiga ugu badan ee lagugu soo celin karo kharashyada daboolan ee soo gala sannad kasta kalandarka waa xaddiga go'an ee sannadkaas kalandarka ah. Qayb kasta oo aan loo isticmaalin sanad-dugsiyeedka laguma rogi karo bixinta kharashyada ku baxay sannad-sannadeedka soo socda.
Kaarkaaga Fududeynta Macaashku wuxuu dhacayaa taariikhda aadan xaq u lahayn dheefaha Carewell SEIU 503 HCA, ama bisha iyo sannadka ku qoran xagga hore ee Kaarka, taarikhdee ugu horreysa. Ameriflex ayaa kuu soo diri doonta Kaar cusub oo ku habboonaanta kaalmada bil ka hor taariikhda uu dhacayo ee Kaadhkaaga hadda ah haddii aad weli u-qalanto dheefaha HCA waqtigaas. Haddii aad su'aalo ka qabtid tan, waxaad la xiriiri kartaa Ameriflex adigoo waca 1-888-868-3539.
Kaarkayga Fududeynta Faa'iidada ma aanan shaqeynin si aan u bixiyo lacagta caymiska, maxaan sameeyaa?
Ka hubi dheelitirkaaga Ameriflex, Maamulaha Kaarka, adoo adeegsanaya barnaamijka MyAmeriflex Mobile App ama koontada Ameriflex, ama wac 1-888-868-3539. Haddii ay jirto lacag ku filan oo lagu bixiyo lacagta caymiska, weydii shirkadda caymiskaaga inuu isku dayo mar kale. Haddii aadan haysan lacag kugu filan Kaarkaaga, fadlan wac 1-844-507-7554, ikhtiyaarka 3, ikhtiyaarka 2 isla markiiba.
Kaarkayga Fududeynta Faa'iidada ma aanan shaqeynin si aan u bixiyo qarashkeyga jeebka, maxaan sameeyaa?
Ka wac Ameriflex, Maamulaha Kaarka, 1-888-868-3539. Waxaad ubaahantahay inaad isu aqoonsato inaad tahay Shaqaale Daryeel-guri oo waxaad heleysaa waxyaabaha soosocda markii lagu soo waco: Kaarkaaga, taariikhda iyo nooca adeega aad iskudayeyso inaad bixiso iyo sharaxaad ku saabsan arinta ku soo martay.
Waxaad u isticmaali kartaa oo keliya Kaadhka Fududeynta Macaashka si aad ugu bixiso adeegyada la daboolay ee la helay isla sannadkaas. Haddii aad ka hesho sheegashooyin sanadkii kaa kaa ka horreeyay ee ku saabsan kharashyada jeebkaaga ee la xiriira adeegga la daboolay, waxaad u baahan doontaa inaad ka faa'iideysato habka lacag-bixinta.
Lacagta Canshuurta Lacagta ee Hore (APTC)
Waa maxay Abaalmarinta Canshuurta Lacageed ee Hore (APTC)?
Abaalmarinta Canshuurta Lacageed ee Advance (APTC) waa deyn canshuur oo ay soo saartay dowladda federaalka ah oo aad u adeegsan karto inaad hoos ugu dhigto bixintaada caymiska bil kasta (oo loo yaqaan "caymiskaaga") markii aad isqorto qorshe loo maro Suuqa Caymiska Caafimaadka. Deyntaada canshuurta waxay ku saleysan tahay qiyaasta dakhliga iyo macluumaadka qoyska ee aad gelisay arjigaaga Suuqa. Haddii dakhliga laguu qiyaasay uu u dhexeeyo 100% iyo 400% ee Khadka Saboolnimada ee Federaalka, waxaad u-qalantaa gunno canshuur-bixin sare.
Si aad ugu qalanto Gargaarka Qiimaha Daryeelka ee bixinta qarashyada qorshahaaga Suuqa la oggol yahay iyo kharashyada jeebka, waa inaad dalbataa qaddarka buuxa ee Dayn kasta oo Canshuuraha Horusocodka ah (APTC) ee aad ugu qalanto qorshaha lacagta. Haddii aad dhayalsato dakhligaaga sanadlaha ah ee qoyska, oo aad hesho APTC ka badan intaad qaadan lahayd, natiijadaasna, waxaa lagugu leeyahay khidmadda dib-u-heshiisiinta ee IRS marka lagu xareynayo canshuurtaada sanadlaha ah, waxaad xaq u yeelan kartaa dib-u-bixinta khidmadda dib-u-heshiisiinta ee Macaashka Xafiiska Maamulka.
Markaad dalbato caymis adigoo maraya Suuqa Caymiska Caafimaadka, waxaad ogaan doontaa inaad uqalanto Abaalmarinta Canshuurta Lacageed ee Advance iyadoo lagu saleynayo waxa aad kuqiyaaseyso dakhligaaga iyo tirada qoyskaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii dakhligaagu isbeddelo, ama haddii aad ku darto ama aad lumiso xubno ka tirsan qoyskaaga, Kaadhkaaga Canshuurta ee Canshuurta (Premium Tax Credit) ayaa suuragal ah inuu isna isbeddelo. Aad ayey muhiim u tahay in sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah looga warbixiyo dakhliga iyo isbeddelada qoyska ee Suuqa Suuqa. Wixii caawimaad ah, la xiriir Xirfadlayaasha Caymiska Dooxada 1-503-974-8471.
Maya. Haddii aad uqalanto Medicaid, xaq uma lihid manfacyada Carewell SEIU 503 HCA, sidoo kale xaq uma lihid wixii Canshuuraha Canshuurta Aasaasiga ah ee Advance ama Dhimista Qiimaha Suuqa. Haddii aad uqalanto Medicaid oo aad hada kuqorantahay qorshaha Suuqa, fadlan wac 1-844-503-7348 sida ugu dhakhsaha badan. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Medicaid iyo qorshaha Suuqa waxaad ka eegtaa healthcare.gov/medicaid-chip/cancelling-marketplace-plan/ iyo wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan caymiska kale iyo qorshaha Suuqa waxaad tixraacdaa healthcare.gov/have-job-based-coverage/ xulashooyinka / .
Maxaan uga baahanahay inaan ka ogaado APTC-ga diiwaan gelinta canshuurta?
Haddii qof reerkaaga ka mid ahi leeyahay qorshe Suuqa, waa inaad heshaa Foomka 1095-A, Caymiska Caafimaadka ee Bayaanka Suuqa ee cashuurtaada. Foomamka 1095 waxaa loo diraa Janaayo-Febraayo si loo daboolo sanadkii hore. Waxaa ku jira macluumaad ku saabsan qorshooyinka Suuqa oo qofkasta oo reerkaaga ka mid ah uu dabool ku lahaa. Waxay ka timaaddaa Suuqa, ma aha IRS. Waa inaad ku heshaa boostada ama koontadaada Suuqa Suuqa. Adiga ama canshuurahaaga diyaarinta waxaad ubaahan doontaan foomka 1095 si loo buuxiyo Foomka IRS 8962, oo loo baahan yahay in sanad walba la xareeyo canshuurahaaga si loo waafajiyo Dhibcaha Canshuuraha Hore ee Advance. Wax badan ka baro Foomka 1095 ee daryeelka caafimaadka.gov/tax-form-1095/. Haddii aadan helin 1095-A, waxaad kala soo bixi kartaa nuqul koontadaada Suuqa ama waxaad toos ula xiriiri kartaa Suuqa Caymiska Caafimaadka 1-800-318-2596.
Wac Gargaarka Maamulka Xafiiska. Waxaad u baahan doontaa inaad u dirto nuqulada foomamkaaga canshuurta 1040, 1095A iyo 8962 Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka, oo ay weheliso Foomka Lacag-celinta La-Qabsiga Lacagta.
Waan dhayalsaday dakhligayga oo waxaa helay APTC aad u badan, maxaan sameeyaa?
U soo gudbi Foomka Lacag-Bixinta Lacag-bixinta oo ay weheliyaan foomamkaaga canshuurta 1040, 1095A iyo 8962 Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka si aad u hesho lacag-bixinta dhammaan ama qayb ka mid ah waxa lagugu leeyahay dowladda Federaalka.
Haddii aad lumiso u-qalmitaanka APTC sababta oo ah Suuqa Suuqa ayaa go'aaminaya tirada qoyskaaga iyo / ama dakhliga kaa hor istaagaya helitaanka deynta canshuurta, weli waad u-qalmi doontaa manfacyada Carewell SEIU 503 HCA ee la xiriira qorshahaaga Suuqa ee la oggolaaday. Si kastaba ha noqotee, haddii aad lumisay u-qalmitaanka APTC sababtoo ah kama jawaabin codsi macluumaad ah, ama haddii kale waxaad ku guuldareysatay inaad qaaddo wax tallaabo ah oo lagu ilaalinayo APTC-da, waxaad xaq u yeelan doontaa oo keliya inaad hesho gunnada kaalmada lacageed ee la bixin lahaa APTC-kaaga lama joojin. Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona farqiga u dhexeeya lacagta caymiska.
Sideen dib ugula soo noqdaa u qalmitaankeyga APTC hadii aan waayo sababtoo ah kama aanan jawaabin ama waan ku guuldareystay inaan qaado talaabo aan ku ilaalinayo APTC-ga?
Haddii aad lumisay u-qalmitaanka APTC sababtoo ah kama jawaabin codsi macluumaad ah oo ka yimid Suuqa, ama haddii kale waxaad ku guuldareysatay inaad qaaddo wax tallaabo ah oo lagu doonayo in lagu ilaaliyo APTC noocaas ah, waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso macluumaadka ay Suuqa Suuqa ka codsaneyso iskuna daydo inaad dib ugu soo celiso canshuurtaada amaahda ama dib-loogu go'aamiyaa deynta canshuurta. Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona faraqa u dhexeeya lacagta caymiska illaa Suuqa Suuqa uu dib u go'aaminayo waxa, haddii ay jiraan, APTC ee aad u qalanto. Wac 1-844-503-7348 wixii su'aalo ah ama Xirfadlayaasha Caymiska Dooxada 1-503-974-8471 si aad uga hesho caawimaad dib ugu soo celinta APTC-kaaga.
Haddii aad hadda ku qoran tahay qorshaha Goobta Suuqa, waxaad u baahan doontaa inaad qaaddo tallaabooyin aad ku joojineyso qorshahaaga Suuqa maalinta ka horreysa qorshahaaga caafimaad uu bilaabmayo. Wakiillada Xirfadleyda Caymiska Dooxada ayaa laga yaabaa inay kaa caawin karaan taas - wac 1-844-503-7348 wixii caawimaad ah. Sidoo kale, haddii aad horey u haysatay Kaarka Fududeynta Faa'idada, fadlan xajiso Kaarkaaga. Waad sii wadi doontaa inaad u adeegsato kharashaadka Medicare ee caymiska, lacagta caymiska, lacagaha lagaa jaro iyo daawooyinka ilaa intaad xaq u leedahay Caawinta Kharashka Caafimaadka. Uma isticmaali kartid Kaarkaaga Fududeynta Macaashka lacagtaada caymiska ee Medicare.
Lacagta laga jaro ee lagu dabaqi karo qorshahaaga Medicare. Lacag la jari karo waa lacagta ay tahay inaad ku bixiso adeegyada qorshahaaga Medicare daboolayo kahor inta aysan Medicare bilaabin inay bixiso.
Lacagta wada-bixinta ah ee loogu talagalay adeegyada caafimaadka iyo daawooyinka lagu bixiyo ee ku jira qorshahaaga Medicare. Wada-bixinta (ama wada-bixinta) waa qaddar go'an oo qorshahaaga Medicare uu kaaga baahan karo inaad bixiso, inta badanna waxay ku habboon tahay waqtiga aad hesho adeegga ama rijeetada laguu qoray.
Caymiska lacagta ee adeegyada caafimaadka iyo rijeetooyinka lagu qoro qorshahaaga Medicare. Caymiska caymisku waa boqolkiiba kharashyada ay tahay inaad ka bixiso adeegyada uu qorshahaaga Medicare daboolayo. Wadaagga qarashku wuxuu u dhexeeyaa 20% ilaa 50% ee adeeg la daboolay, iyadoo kuxiran qorshahaaga Medicare. Tusaale ahaan, haddii qorshahaaga Medicare uu leeyahay "80/20" lacagta caymiska, tani waxay ka dhigan tahay, ka dib markaad bixiso wax kasta oo laga jari karo, qorshahaaga Medicare wuxuu bixin doonaa 80% ee kharashka ku baxa kharashka caafimaadka waana inaad bixisaa inta hartay ee 20%.
Kaarka Fududeynta Faa'iidada waxaa horay loogu sii shubay lacagta sanadlaha ah ee lagu bixinayo wada-bixinta caafimaadka iyo daawooyinka, lacagaha laga jaro iyo kharashaadka caymiska ee adeegyada la daboolay iyo daawooyinka. Sanadka 2021, lacagtaas waa $6,500, laakiin tani way isbadali kartaa sanadba sanadka ka dambeeya.
Kaarkaaga Fududeynta Macaashku wuxuu dhacayaa taariikhda aadan xaq u lahayn dheefaha Carewell SEIU 503, ama bisha iyo sannadka ku qoran xagga hore ee Kaarka, taarikh kasta oo hore. Ameriflex ayaa kuu soo diri doonta Kaar cusub oo ku habboonaanta kaalmada bil ka hor taariikhda uu dhacayo ee Kaadhkaaga hadda ah haddii aad weli u-qalanto dheefaha HCA waqtigaas. Haddii aad su'aalo ka qabtid tan, waxaad la xiriiri kartaa Ameriflex adigoo waca 1-888-868-3539.
Macaashkaaga Waqtiga Bixinta La Bixiyay waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu saleynayo mushaharka aad qaadatay bishii ugu horreysay ee aad u-qalantay. Dad badan oo daryeel bixiyayaal ah tan waa $15 saacadiiba, laga bilaabo Janaayo 2020.
Waxaad ka heli doontaa warqad Xafiiska Maamulka Gargaarka Feebarwari iyo Luulyo bil kasta oo ay la socoto qaddarka waxtarkaagu. Haddii aad codsato qayb ka mid ah waxtarkaaga oo aadan ogeyn waxa kuugu harsan waxaad wici kartaa Xafiiska Maamulka Faa'idooyinka 1-844-507-7554, ikhtiyaarka 3, ikhtiyaarka 2.
Foomka Magacaabista Ka-faa'iideystaha ayaa kuu oggolaanaya inaad xulato qof qaadanaya waxtarro dheeri ah oo PTO ah oo haray dhimashadaada ka hor intaadan helin faa'iidadaas. Haddii aan la magacaabin ka-faa'iideyste, ama haddii ka-faa'iideystaha aad u dooratay uusan kaa badbaadi doonin ama haddii aan la heli karin, isku-darka dheellitirka ayaa la siin doonaa fuliyaha dhismahaada.
Waqtiga Lacagta La Bixiyay Waa Dakhli Canshuur Leh. Haddii aad hesho $600 ama in ka badan oo ah gunnooyinka fasaxa ee mushaharka hal sano ah, waxaad ka heli doontaa Foom 1099 Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka. Faa'iidada wali waa dakhli canshuur laga qaadi karo xitaa haddii aadan helin Foom 1099.
Sideen ku heli karaa daryeel bixiye daryeel si aan ugu helo macmiilkayga intaan ku maqanahay fasaxa?
Xilkaaga ma aha inaad hesho badalkaaga markaad qaadato fasax mushahar leh. Macaamilka ayaa leh mas'uuliyadda koowaad ee xulashada iyo shaqaalaynta adeeg bixiyayaashooda. Fasaxa lacagta la siinayo waa inuu horay u oggolaadaa macaamilka, gargaarka waa inuu jiraa haddii loo baahdo iyo hay'adda ku habboon waa in la ogeysiiyaa si loo oggolaado saacadaha shaqaalaha beddelka ah. Mararka qaarkood macaamilku wuxuu caawimaad uga baahan doonaa maareeyaha kiiska / wakiilka shakhsi ahaaneed / iskuduwaha adeegga si loo helo adeeg bixiye ku habboon.
Miyaan u baahanahay inaan ku soo wargeliyo maalmaha ama saacadaha aan ka tegayo macmiilkayga Xafiiska Maamulka Faa'idooyinka?
Maya, uma baahnid inaad ku soo wargeliso waqtigaaga fasaxa Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka.
Ayaa u baahan dhameystirka tababarka?
Daryeelka guriga ee hadda jira iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed waxay u baahan doonaan inay dhammaystiraan 12 saacadood oo tababar cusboonaysiin ah Maarso 31, 2022.
Taageerada shaqsiyadeed ee cusub iyo shaqaalaha daryeelka guriga waxay u baahan doonaan inay dhammaystiraan hanuuninta afar saac ka hor intaanay bilaabin inay u shaqeeyaan macaamilka, iyo siddeed saacadood oo tababbar asaasi ah gudahood ah 120 maalmood gudahood laga bilaabo bilowga shaqada.
Tababarada uu bixiyo Tababarka Carewell SEIU 503, waxaad ka heli kartaa macluumaadkaaga dhameystirka tababarka adoo u maraya Bogga Daryeelka Waxbarshada ee Carewell. Waxaad sidoo kale nala soo xiriiri kartaa adoo wacaya 1-844-503-7348 ama emayl u soo diraya CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com .
Tababarada iyo shahaadooyinka ay bixiso Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon, la xiriir OHCC adoo wacaya (877) 867-0077 ama emayl u dira Shahaadooyinka.OHCC@dhsoha. gobolka . ama.us.
Ma layga rabaa inaan qaato tababarka haddii aniga & #039; ma bixiyaha daryeelka qoyska?
Haa. Dhammaan daryeel-caafimaadeedka guriga iyo shaqaalaha taakuleynta shaqsiyeed ee lagu magdhabo Medicaid ama Madaxbanaanida Mashruuca Oregon - xitaa kuwa kaliya u shaqeeya xubnaha qoyska ─ waxaa looga baahan yahay inay buuxiyaan shuruudaha tababarka cusub.
Waxaa lagaa doonayaa inaad qaadato tababarka haddii aad tahay daryeel guri ama shaqaale taageero shakhsi ah oo si toos ah ugu shaqeeya macmiil. Looma baahna inaad tababarka qaadatid haddii aad ka shaqeysid goob sida guri korsasho, guri kooxeed, xarun daryeel degaan, xarun lagu caawiyo, ama xarun daryeel. Waxaa jira shuruudo kala duwan oo ay tahay inaad raacdo. Sidoo kale uma baahnid inaad qaadatid tababarka haddii aad la shaqeysid hay'adaha gudaha ama hay'adaha adeegga. Looma baahna inaad tababarka qaadatid haddii aad ka tirsan tahay Barnaamijka Madaxa Banaan ee Xulashooyinka (ICP), laakiin waxaad qaadan kartaa tababarka haddii aad rabto.
SEIU 503 iyo Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon waxay soo saareen koox hawleed tababar si loo dhiso heerarka tababarka ugu yar ee bixiyeyaasha daryeelka. Kooxda shaqadu waxay ka kooban tahay wada-hawlgalayaasha bulshada, daneeyayaasha, kooxaha u doodista, ururka matala shaqaalaha (SEIU), daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed, macaamiisha, iyo wakiillada Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon. Kooxda shaqadu waxay aqoonsadeen mawduucyo badan oo muhiim ah in lagu daro oo ka faa'iideysta macaamiisha iyo bixiyeyaasha daryeelka.
Maxaa dhacaya haddii aan seego waqtiga loo qabtay tababarka?
Haddii aadan buuxinin waqtiyada kama dambaysta ah, waxaad u badan tahay inaad joojiso inaad u shaqayso macaamilkaaga illaa aad ka buuxiso shuruudaha. Tan waxaa lagu go'aamin doonaa nidaamka dejinta.
Xilligan Carewell wuxuu kaliya ku bixiyaa tababar khadka tooska ah. Markay amaan tahay in lagu laabto fasalka, tababarka ayaa lagu qaban doonaa dhammaan gobolka Oregon. Taariikhaha iyo goobaha waxaa lagu dhajin doonaa Xariirka Wax Barashada ee Carewell .
Kooxda Tababarka ee Carewell SEIU 503 waxay ka shaqeynayaan sidii loo bixin lahaa tababaro luuqado kala duwan ah oo ay ka mid yihiin Carabi, Isbaanish, Ruush, Fiyetnaam, Mandarin (cod-dhaaf), iyo Shiinaha oo fudud (qoran). Haddii tababarka aan hadda lagu bixin luqadda aad doorbideyso, kooxda Tababarka Carewell SEIU 503 ayaa kula shaqeyn doonta si aad u ballansatid turjubaan koorsooyinka aad ka qayb gasho. Si aad u codsato turjubaan emayl u soo dir carewellseiu503training@risepartnership.com ama wac 1-844-503-7348.
Maya. Si kastaba ha noqotee, haddii aad kasbatay shahaado iyada oo loo marayo Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon oo aad sii waddo inaad la kulanto shuruudaha shahaadooyinka, uma baahnid inaad qaadatid koorsooyin waxbarasho oo sii socda oo aan ka ahayn waxa looga baahan yahay si loo ilaaliyo caddaynta gaarka ah. Halkan guji si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan horumarka xirfadaha iyo shahaadooyinka .
Ayaa laga dhaafay tababarka?
Fadlan la soco si aad uga sii dhaafto, waxaad u baahan doontaa inaad shahaadada si firfircoon uga sii wadatid. Haddii aadan hubin inaad haysato mid ka mid ah shahaadooyinkan firfircoon, fadlan la xiriir Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon adoo wacaya 877-867-0077 ama u diraya emayl shahaadooyinka.OHCC@dhsoha.state.or.us .
Waqtigaan la joogo, Carewell wuxuu kaliya ku bixiyaa tababar khadka tooska ah. Markay amaan tahay in lagu laabto fasalka, tababarka ayaa lagu qaban doonaa dhammaan gobolka Oregon. Taariikhaha iyo goobaha waxaa lagu dhajin doonaa Xariirka Wax Barashada ee Carewell .
Kadib markaad iska qorto Bogga Xirfadaha Waxbarshada ee Carewell , waa inaad awood u yeelataa inaad xulato oo aad iska qorto koorsooyin kasta oo khadka tooska ah ah oo aad heli karto. Waxaad u baahan doontaa qalab leh marin internet sida taleefan casri ah, kumbuyuutar, ama kombiyuutar si aad uhesho fasallada qadka.
Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno! Waxaan haynaa fursado waxbarasho oo kala duwan. Fadlan nala soo xiriir si aan u helno ikhtiyaar si fiican adiga kuu shaqeeya. Naga soo wac 844-503-7348 ama iimayl u dir CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com .
Kawaran hadaanan & #039 aanan helin kombuyuutar?
Ma haysatid marin taleefan casri ah ama kiniin ah? Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno! Waxaan haynaa fursado waxbarasho oo kala duwan. Fadlan nala soo xiriir si aan u helno ikhtiyaar si fiican adiga kuu shaqeeya. Naga soo wac 844-503-7348 ama iimayl u dir CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com .
Dhagsii xiriirka ku yaal geeska gacanta midig ee kore ee Bogga Xirfadaha Waxbarshada ee Carewell si aad u gasho. Xiriiriyahaan, haddii aadan aqoon lambarkaaga sirta ah, waxaad gujin kartaa "Forgot Password" oo kuu soo diri doonta xiriiriye si aad dib ugu dajiso lambarkaaga sirta ah.
Maya. Tababarku waa u bilaash dhammaan daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyeed.
Kuwa applyin g in ay guri ku ah ama shaqaalaha taageerada qofka la siin doonaa $65 doon gunno waayo guul leh ku dhammaysanaysid Online Core iyo $65 doon gunno u soo xaadireen Workshop Core. Ma jiraan wax gunno ah oo lagu bixin karo ka-qayb-galka Jihaynta.
Bixiyeyaasha daryeelka hadda waxaa la siin doonaa gunno muddo ah oo lagu qaatay ka-qaybgalka fadhiyada tababarka ee cusbooneysiinta. Waxaa jira $135 guno ah oo loogu talagalay dhammaystirka Online Refresher iyo $65 guno ah oo lagu dhammaystiro Aqoon isweydaarsiga Refresher.
Markaad si guul leh u dhammaysato koorsadaada u-qalmitaanka mushaharka ugu horreeya, waxaa lagu siin doonaa ikhtiyaarka aad ku doorato sida aad ku hesho gunnada. Waad dooran kartaa inaad ku heshid kaarka fiisaha ee jirka ah boostada ama kaarka dijitaalka ah emayl ahaan. Si aad u hesho gunnada waqtiga loogu talagalay, fadlan xaqiiji cinwaanka boostadaada iyo cinwaanka emaylka inay cusbooneysiinayaan boggaaga Xariirka Barashada ee Carewell . Stipend-yada waxaa loo diraa laba jeer bishiiba, markaa waxay qaadan kartaa dhowr toddobaad in gunnada laguu soo helo. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg Siyaasadda Kordhinta .
Haddii aad tahay shaqaale daryeel guri, wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan sida loo buuxiyo loona soo diro foojarrada, fadlan booqo qaybta Casharrada ee OHCC Kheyraadka Shaqaalaha Shaqaalaha Daryeelka Guriga .
Waxaad sidoo kale tixraaci kartaa fiidiyaha halkan .
Haddii aad tahay shaqaale taakuleyn shakhsi ah, wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida loo isticmaalo eXPRS fadlan booqo Kheyraadka Shaqaalaha Taageerada Shakhsi ahaaneed ee websaydhka ODDS.